DF oo Gaadiid Ciidan ku wareejisay Booliiska Galmudug +Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
DF oo Gaadiid Ciidan ku wareejisay Booliiska Galmudug +Video
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa deeq gaadiid ah ku wareejiyay Booliska Maamulka Galmudug si shacabka ku hoos nool maamulkaasi loogu adeego.
Xaflada wareejinta Gaadiidka oo ka dhacday magaalada Cadaado oo xarun KMG u ah maamulka Galmudug ayaa waxaa goob joog ahaa mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo uu ka mid ahaa Wasiirka amniga iyo Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska,waxaana ka hadlay mas’uuliyiin halkaasi ku sugnaa.
Wasiirka amniga maamulka Galmudug Cusmaan Nuur Ciise (Taar-dhuleed) oo ka hadlay Gaadiidka lagu wareejiyay Booliska Galmudug ayaa sheegay in deeqda Gaadiidka oo afar gaaraya lagu soo aadiyay xilli baahi weyn ugu qabeen Booliska maamulka Galmudug si howsha u adeegida shacabka si habsami leh ugu socoto.
Sidoo kale,Wuxuu hoosta ka xariiqay in Gaadiidka qeyb weyn ka qaadan doonaan sugida amniga iyo dhiira gelinta howlgalka lagu baadi goobayo dadka falalka amaandari geysta.
Maamulka Galmudug oo dhawaan la dhisay ayaa hada dadaal ugu jira sidii loo dar dar gelin lahaa howsha muhiimka ah ee loo hayo Shacabka Galmudug iyo waliba inuu isku balaariyo deegaanada kale ee gacantooda ka maqan.